jetAudio na-eweta Egwuregwu egwu dị ike na Customizable na gam akporo | Akụkọ akụrụngwa
N'ihe banyere ụfọdụ ndị na-egwu egwu desktọọpụ kachasị mma, ọtụtụ ịrụ ọrụ na desktọọpụ, jetAudio doro anya na ọ dị elu na ndepụta ahụ. Ọ bụrụ na ị bụ onye ọrụ nke android, ị ga-enwe obi ụtọ ịmata na Cowon, ụlọ ọrụ n'azụ jetAudio, dị nnọọ gbara android variant jetAudio na ụlọ ahịa PlayGoogle, na ọ dị ezigbo mma. Ejiri ya na usoro ọrụ zuru oke, yana nkwado maka ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ụdị faịlụ ọ bụla a maara (gụnyere MP3, WAV, OGG, FLAC, M4A, MPC, TTA, WV, APE, MOD, SPX, AIFF). Isi interface nke ngwa a na-esote atụmatụ dị mfe, ma nye gị nhọrọ iji chọgharịa egwu egwu site na ndị na-ese ihe, ọba, egwu, folda na listi ọkpụkpọ. The music player interface bụ enweghị obi abụọ otu nke kasị mma na kacha mfe iji na anyị hụrụ na ihe gam akporo ngwaọrụ.
N'elu ihe niile, E-band 10-band na 32 ụdị ụda dị iche iche dị iche iche na nhọrọ egwu egwu dị ike na BBE, BBE VIVA, sara mbara, ntụgharị, njikwa uru akpaka (AGC), na ntọala mmetụta X-Bass. Ụda, nkwado maka ịjụ oyi na-enweghị-blanks music playback, na-elekọta mmadụ media mwekota (nkọwa n'okpuru), mgbanwe playback ọsọ, customizable ụra ngụ oge na-amalite na-akwụsị playback, na ọtụtụ visual ịdị mma mfe ime jetAudio otu n'ime ndị egwu egwu kachasị mma maka gam akporo dakwasịrị ahịa ruo ugbu a.
Na-ekwu jetAudio dị ka onye mmeri bụ otu n'ime mmalite mmalite n'ọsọ ahụ maka ndị egwu kachasị egwu maka android ọ ga-abụ ntakịrị ihe ezighi ezi, ebe ọ bụ na ị nweghị ụfọdụ nhọrọ dị oke mkpa ugbu a anyị ga-atụle ma emechaa. Agbanyeghị, site na nsonaazụ ọdịyo dị ike dị egwu, imepụta ihe mara mma yana ịhazi ọtụtụ, onye ọkpụkpọ na-adọta ndị egwu egwu dị egwu iji nwee ọ musicụ egwu egwu dị elu na ngwaọrụ gam akporo ha na njikwa njikwa achọrọ nke ọma.
Ga n'ihu na ogologo ndepụta atụmatụ ngwa, nke awade a di na nwunye nke nnọọ kemfe utilities maka ịchịkwa ịkpọ egwu ma gaa na ndepụta ọkpụkpọ kachasị amasị gị na ihuenyo ụlọ. Dị ka ọtụtụ ndị egwu egwu dị egwu, jetAudio na-akwado wijetị ngosi ngosi ngosi nke na-enye gị ohere igwu egwu / kwụsịtụ ma gbanwee n'etiti egwu, na-enweghị isi na isi ngwa nke ngwa ahụ. E wezuga nke ahụ, jetAudio na-ewetakwa ụfọdụ omenaala aghụghọ amamịghe na mgbasa ozi mmekọrịta. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na enyere gị ikike, egwu ị na-ege nwere ike ịdepụta na akpaghị aka na Twitter na / ma ọ bụ Facebook. Ọ na-enye gị ohere ịkọwapụta omume omenala mgbe ị gbanwere n'etiti egwu, ma aka na akpaghị aka.
N'ihi na ntuziaka ịmafe ịmafe, ị nwere ike ịtọ ngwa mbụ kwụsị nke ugbu a track na mgbe ịgbanwee gaa na nke ọzọ, mgbe ịjụ oyi ma ọ bụ agwụ-esi nke ugbu a track n'ihu na-aga na-esote. N'otu aka ahụ, ọ na-enye gị ohere ịhọrọ ndabara ndabara maka akpaaka-ọganihu track ịmafe. N'echiche a, ị nwere nhọrọ nke ịhazi ngwa ahụ iji kpọọ egwu na-enweghị nkwụsịtụ, gbanyụọ n'etiti egwu dịka usoro nke onye ọrụ akọwapụtara, oge agafe, ma ọ bụ kpọọ egwu na-esote, mgbe obere nkwụsịtụ nke sekọnd ole na ole.
Mgbe ahụ enwere nhọrọ ịkọwapụta ọnọdụ n'okpuru nke ịchọrọ ka ngwa ahụ mejuputa ọrụ mpempe akwụkwọ nsuso. Dịka ọmụmaatụ, ịnwere ike ịgbanwuo ma ọ bụ gbanyụọ atụmatụ mbugharị kpamkpam, ma ọ bụ tinye ya na egwu karịrị 10, 15, ma ọ bụ 20 nkeji. Olu na-ada na / ọpụpụ ọrụ, ebe ịmalitegharị / kwụsịtụ egwu ndị ahụ nwekwara ike ịrụ ọrụ site na isi ihuenyo nke ngwa ntọala. N'etiti nhọrọ ndị ọzọ na ihu ịchọ mma, ị nwere ike hazie ngwa ahụ iji gosipụta nka ọba (yana ihe nkiri) na windo playback. E nwekwara nhọrọ iji tọọ album nka dị ka ndabere nke ahọrọ album n'ime ngwa si n'ọbá akwụkwọ interface.
Gaba na ihuenyo nsonaazụ nsonaazụ ngwa, ọ na-ekele gị na iri na abuo customizable ụda ntọala, gụnyere nhọrọ:
Ndabere ntọala ekpe / nri ụda ziri ezi
Setịpụ ndabara preamp larịị (na-akpaghị aka na-agbanwe ụda olu tupu itinye ụfọdụ nsonaazụ ụda)
Gbanwee ndabara akpaka uru akara (AGC) iji belata fluctuations na olu n'etiti dị iche iche egwu
Kwado BBE, BBE LIVE, Wider Stereo Image, Reverb, na X-Bass (na njirimara ụda akọwapụtara onye ọrụ, ogo mmetụta, na ọnọdụ metering reverb)
Debe ọsọ agba ọhụụ dị ugbu a n'ebe ọ bụla n'etiti 2,0 x 0,5 xa (na nhazi ndozi akpaaka)
Mee ọ rụọ ọrụ nhazi nhazi, họrọ ihe etinyere gị na nhazi ụda
Ugbu a, ihe omimi nke ngwa a dum: ihe ntaneti egwu egwu. Site na mbido, Otú ọ dị, jetAudio dị ka onye ọzọ na-egwu egwu egwu na-ejikwa njikwa maka egwu egwu na egwu egwu, wdg. Otú ọ dị, bọtịnụ dị iche iche dị ugbu a n'elu windo egwu egwu nwere ike ịbịaru aka maka ịkọ ụda, ịwụli elu na ntọala ntọala EQ ma ọ bụ SFX iji kọwaa ntọala ụda kachasị amasị gị, na-ekwe ka oge ụra, na ịhazigharị ụda olu yana nhazi ụda.
Iji jikwaa egwu egwu ugbu a, ị nwere ike pịa bọtịnụ dị n'elu aka nri ma ọ bụ dọrọ ala n'ebe ọ bụla na interface ọkpụkpọ ahụ iji malite listi ọkpụkpọ. Na ịme ọpịpị n'ebe ọ bụla na etiti nke album nkà window na-ekpughe a kọmpat panel na-ahapụ gị ịchịkwa ọsọ nke music playback. Ka ịgbanwee n'etiti egwu, ị nwekwara ike swipe n'aka ekpe / aka nri na album art window. Mgbe ị na-ege egwu egwu, ịnwere ike ịtọ ya dị ka ụdaolu nke ngwaọrụ gị, ma ọ bụ tinye ya na listi ọkpụkpọ kachasị amasị.
Dịka e kwuru na ibe ngwa ngwa Google Store Play, ya na jetAudio Basic (mbipute n'efu), ị ga-atachi obi na mgbasa ozi, n'otu oge ahụ, na-eme na-enweghị BBE / BBE ViVA nsonaazụ ụda dị elu. Ndị ọrụ ga-enwe ike ibuli ihe mgbochi niile na ụdị jetAudio Plus, oge ọ bụla emere ya. Ihe niile, na jetAudio, gam akporo achọtala egwu egwu dị egwu na-egwu egwu nke na-enye ọtụtụ atụmatụ ahụ n'efu.
jetAudio Basic chọrọ Android v2.3.3 ma ọ bụ karịa ka ị na-agba ọsọ, enwere ike ibudata ya site na njikọ dị n'okpuru.
Budata JetAudio Basic
Ozi ndị ọzọ - (Na-eche Ọnọdụ Gị: egwu egwu maka oge niile na mmetụta uche [WP7])
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » software » jetAudio na-eweta egwu egwu dị egwu ma na-agbanwe agbanwe na gam akporo